Cozah Thawngthanh; Kawlram COVID-19 Zawtnak A Ngeimi Minung (63) - THE CHINLAND POST
Cozah Thawngthanh; Kawlram COVID-19 Zawtnak A Ngeimi Minung (63)
TCP-Hakha, 2020 April 14 – COVID-19 Dohnak le Runvennak Kongah Kawlram Ramkomh Cozah Thawngthanh April 14, 2020 8:00pm
Kawlram Ngandamnak le Lentecelhnak Vuanci Zung nih Ramkulh-Ramthen cio ah COVID-19 zawtnak dohnak le runvennak rian cu mah le uktu hna, rianngeitu zung hna he pehtlai in rian tuan cuahmah lioasi.
April 13, 2020 zanlei 6:00pm in April 14, 2020 zanlei 6:00pm kar zohkhenhmi miza thar minung (123) an um.
Yangon um National Health Labotary Dept i April 14, 2020 zan 7:00pm thawngthanh ningin COVID-19 zawtnak runvennak le tlunkalnak khammi Home Quarantine minung (91) an tuahmi chungin hrikangeimi minung (1) hmuh chapasi. A dang minung (90) ah zawtnak hmuhasi rih lo.
Atutiang ah Kawlram chungin COVID-19 hrikangei cangmi mi minung (63) an si cang. Cu hna umnak cu
Chin ramkulh Tedim Siizung ah minung (3)
Yangon Webaki Special Siizung ah minung (49)
Shan ram (chaklei), Lashio Siizungah minung (1)
Mawlamyine Siizungah minung (1)
Sisanthun Siizung ah minung (1)
Magwe Siizung ah minung (1)
Nihin hmuhtharmi minung (1) an zapi minung (57) an si. An ngandamnak zong anmah kel in an um lioasi.
COVID-19 hrikangei vemi ah minung (2) hi an dam cang nain tlunkal le mi sin thlah dingin sianh rihlo (Quarantine) in an um rih. Minung (4) hi COVID-19 ruangahathi cangmi an si.
(Note: An zapi minung (63))
5. Kawlram ngandamnak le Lentecelhnak Zung (Ministry of Health & Sport, Myanmar) nih COVID-10 kong he pehtlai in April 15, 2020 zing sml 9:00-10:00 ah voikhat, zan sml 8:00-9:00 kar ah voikhat tiin thawngthanhnak an tuah than lai.
(၁၄-၄-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
၁။ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနသညျ တိုငျးဒသေကွီး- ပွညျနယျအသီးသီးတှငျ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျ‌‌ခွငျးနှငျ့ စောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုခွငျးလုပျငနျးမြားကို သကျဆိုငျရာ ဒသေအာဏာပိုငျအဖှဲ့မြား၊ အခွားဌာနဆိုငျရာမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျ၍ အရှိနျအဟုနျမွှငျ့ ဆောငျရှကျ လကျြရှိပါသညျ။
၃။ အမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (ရနျကုနျ)၏ (၁၄-၄-၂၀၂၀)ရကျနေ့၊ ည‌ (၇)နာရီအခြိနျ ထုတျပွနျခကျြအရ COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွညျ့လူနာနှငျ့ အသှားအလာကနျ့ သတျခွငျး- တားမွဈခွငျး ဆောငျရှကျထားရှိသူ စုစုပေါငျး (၉၁)ဦးအား ပထမအသုတျအနဖွေငျ့ စဈ‌ဆေးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တှငျ ဖျောပွထားသူ (၁)ဦးတှငျ COVID-19 ရောဂါပိုးတှရှေိ့ရသဖွငျ့ ၎င်းငျး အားသကျဆိုငျရာဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျ၍ ကုသမှုပေးရနျ ဆကျလကျစီစဉျဆောငျရှကျသှား မညျဖွဈပွီး ကနျြ (၉၀)ဦးတှငျ COVID-19 ရောဂါပိုး မတှရှေိ့ပါကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
၄။ ယခုအခြိနျအထိ COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာ (၆၃)ဦး တှရှေိ့ပွီးဖွဈကာ ၎င်းငျးတို့အနကျ –
ခငျြးပွညျနယျ၊ တီးတိနျ ပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ (၃) ဦး၊
ရနျကုနျမွို့၊ ဝဘောဂီအထူးကုဆေးရုံကွီးတှငျ လူနာ (၄၉) ဦး၊
ရှမျး ပွညျနယျ (မွောကျပိုငျး)၊ လားရှိုးပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ (၁)ဦး၊
မျောလမွိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ လူနာ (၁) ဦး၊
စဝျစံထှနျးပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ လူနာ (၁)ဦးနှငျ့
ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ မကှေးမွို့တှငျ (၁)ဦး၊
ယခုသတငျးတှငျ ဖျောပွထားသညျ့ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာသဈ (၁)ဦး၊ စုစုပေါငျး (၅၇)ဦး၏ ကနျြးမာရေးအခွအေနမှော တညျငွိမျလကျြရှိပါသညျ။
COVID-19 ရောဂါပိုးကငျးစငျ၍ ဆေးရုံဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့ပွီး ရောဂါစောငျ့ကွညျ့လူနာနှငျ့ အသှားအလာကနျ့ သတျခွငျး တားမွဈခွငျး (Quarantine) ဆကျလကျ ဆောငျရှကျ ထားရှိသူ (၂)ဦးနှငျ့ သဆေုံးသူ (၄)ဦးတို့ ဖွဈပါသညျ။
၅။ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနအနဖွေငျ့ COVID-19 ရောဂါနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျမှုအား (၁၅-၄-၂၀၂၀) ရကျနမှေ့စ၍ နံနကျ (၉)နာရီမှ (၁၀) နာရီအကွားတှငျ တဈကွိမျနှငျ့ ည (၈)နာရီမှ (၉) နာရီအကွားတှငျ တဈကွိမျတို့ဖွငျ့ ထုတျပွနျသှားမညျဖွဈပါသညျ
COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
(၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် တိုင်းဒေသကြီး- ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့များ၊ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
၂။ (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၆)နာရီမှ (၁၄-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ညနေ (၆)နာရီအထိ စောင့်ကြည့်လူနာအသစ် (၁၂၃) ဦး ရှိပါသည်။
၃။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်)၏ (၁၄-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည (၇)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာနှင့် အသွားအလာကန့် သတ်ခြင်- တားမြစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိသူ စုစုပေါင်း (၉၁)ဦးအား ပထမအသုတ်အနေဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တွင် ဖော်ပြထားသူ (၁)ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသဖြင့် ၎င်း အားသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်၍ ကုသမှုပေးရန် ဆက်လက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပြီး ကျန် (၉၀)ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄။ ယခုအချိန်အထိ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၆၃)ဦး တွေ့ရှိပြီးဖြစ်ကာ ၎င်းတို့အနက် –
ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် (၃) ဦး၊
ရန်ကုန်မြို့၊ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် လူနာ (၄၉) ဦး၊
ရှမ်း ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် (၁)ဦး၊
မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် လူနာ (၁) ဦး၊
စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် လူနာ (၁)ဦးနှင့်
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့တွင် (၁)ဦး၊
ယခုသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၇)ဦး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်လျက်ရှိပါသည်။
COVID-19 ရောဂါပိုးကင်းစင်၍ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာနှင့် အသွားအလာကန့် သတ်ခြင်း တားမြစ်ခြင်း (Quarantine) ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ထားရှိသူ (၂)ဦးနှင့် သေဆုံးသူ (၄)ဦးတို့ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်မှုအား (၁၅-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ နံနက် (၉)နာရီမှ (၁၀) နာရီအကြားတွင် တစ်ကြိမ်နှင့် ည (၈)နာရီမှ (၉) နာရီအကြားတွင် တစ်ကြိမ်တို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်
Previous Hlasa minthang Myo Gyi Covid-19 zawtnak ngei; David Lah taza an cuai